Ndedzipi mhando dzeyakajairika tai Yi guardrail network?
ne admin pane 20-07-02
1. Furemu yekuchengetedza mambure Furemu yekuchengetedza mambure inonziwo "iyo furemu mhando inorwisa-kukwira yekutenderera jira mambure", "fureni yekuzviparadzanisa gridhi" zvichingodaro. Iyo igungano rezvinhu zvinogadziriswa, furemu yekuchengetedza mambure yakashandiswa zvakanyanya, inozivikanwa kupfuura general guardrail net yakakwira, ...
Chikumbiro chiyero chewaya chengetedzo mambure
Yakavharwa waya, inozivikanwawo sewaya waya waya, waya yekuzviparadzanisa mambure, waya fenzi mambure. Iyo seti yekuchengetedza, yakanaka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, inoshanda mune imwe nyowani mhando yefenzi mambure. Waya pajira riya zvinhu zviri welded pamwe yepamusoro kabhoni simbi waya, kupatsanura ne pamusoro kurapwa: dema waya protectiv ...
Yakavharwa waya mune yekuvaka indasitiri yekuvandudza maitiro
Iye zvino indasitiri yekuvaka yakawedzera nekukurumidza. Vamwe vavaki vakuru vezvivakwa vari kushandisa matekinoroji matsva ekuvaka muzvivakwa zvepamusoro, mashopu uye kumwe kunhu. Iko kushandiswa kwemambure ekuvakisa, waya wakakombwa uye mamwe mambure kutsiva echisungo echisungo cherebar rave kushandiswa zvakanyanya mu ...